बाल ज्योति माविमा भवनसहित कम्प्युटर ल्याबको एकैसाथ उद्घाटन , News of Nepal - The Horizon Times
बाल ज्योति माध्यमिक विद्यालय बिसुनपुरमा नवनिर्मित विद्यालयको भवनसहित कम्प्युटर ल्याबको एकैसाथ उद्घाटन गरिएको छ । जिल्लाको शिवराज नगरपालिकाको वडा नं. ८ मा शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच शिवराज नगर प्रमुख नेत्रराज अधिकारीले भवनसहित कम्प्युटर ल्याबको उद्घाटन गरिएकाे विद्यालयले जनाएको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख नेत्रराज अधिकारीले आजको युग प्राविधिक युग भएको बताउँदै कम्प्युटर शिक्षा आजको आधारभूत आवश्यकता भएको बताए । अहिले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरीयतालाई बृद्धि, विकास र प्रभावकारी बनाउन कम्प्युटर प्रविधि नभई नहुने उनले जनाए ।
समय परिवर्तनसँगै सबै विद्यालय, शैक्षिक संस्थाहरुमा कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य हुनुपर्ने अधिकारीको भनाई छ । विद्यार्थीको आवश्यकता अनुसार विद्यालयले ल्याबको व्यवस्थापन गरेको भन्दै नगर प्रमुख अधिकारीले प्रशंसासमेत गरे ।
यसैबीच विद्यालयले सरस्वती माताको मूर्तिसमेत स्थापना गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मुलचन्द यादवले बताए । उनले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरीयतालाई मध्यनजर गर्दै बाल विकास केन्द्रमा एल.सी.डी. व्यवस्थापन आर.सी.सी निर्माण र चर्पीमा पानी सप्लाई विषयगत शिक्षक व्यवस्थानसमेत गरिएको अध्यक्ष यादवले जनाए । आगामी दिनमा शैक्षिक स्तरलाई अझै व्यवस्थित गर्दै योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडी बढ्दै जाने समेत उनले जिकिर गरे ।
Nepal को गाउँ-गाउँमा दहेज प्रकोप बिरूद्ध स्टेज नाटक कार्यक्रम
Nepal को ग्रामीण भागमा बाल विवाह गम्भीर रोग भएकोले चेतना सिर्जना गर्न सडक नाटक प्रदर्शन
Nepal Aadarsh School kapilvastu ले शिक्षक र पूर्वाधारको digitally मुहार फेर्दै
कुर्थावल, Nepal मा छुवाछूत विरुद्ध सडक नाटक कार्यक्रम सम्पन्न
प्रहरी चाैकि तथा सशस्त्र प्रहरी बलमा स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण in Nawalparasi Nepal